Malite Baby & Nwa
ụmụaka isearch - October 31, 2017 0
Ndị na-eto eto na ndị toro eto na-ahụkarị ụgbọelu na-anya ụgbọ elu. Mgbe ụfọdụ, ọ na-esiri ha ike ma ọ bụghị naanị ihe egwuregwu. Obere obere ...
Ndị uwe ojii enyi gị na onye inyeaka, a na-akpọkarị ndị uweojii. Ma olee ụdị ọrụ ndị uweojii nwere na olee otú ọ dị?
ọta akara isearch - September 28, 2017 0
Ụmụaka karịsịa na-etinye oge ka ukwuu n'oge ha na-ehi ụra. Ha dinara n'ihe ndina ruo 20 awa. Nke a bụ ihe mere ọ dị mkpa iji nwee ihe kwesịrị ekwesị ...
12341 peeji nke 4